Ilayisi lomdaka liyisiluleko esisetyenziselwa ukuphucula umzimba. Asisetyenziswanga njengomkhiqizo wokutya. Ukubunjwa kwerayisi yerwandle kubandakanya izinto ezininzi ezinobuncedo, ngoko ke ukusetyenziswa kwayo kokuthintela kuncedo kakhulu. Ukunyanga izifo ezinzulu kunye nelayisi lomlambo akucebisi. Kule ncwadi uzakufunda indlela yokulungisa isiselo esiselwandle.
Ukubunjwa kwamathambo, okubonakalayo xa i-bacteria ihlanganiswe, ikhula kuphela emanzini, kwaye ukubonakala kwayo kufana nelayisi elibilisiweyo kuthiwa irayisi elwandle.
Ilayisi lonyango elwandle linembali enzulu. Ngoncedo lwawo, nakumaxesha amandulo, ezininzi izifo zaphathwa. Isithethe sokusebenzisa irayisi yomlambo ngenjongo yokwelapha ishintshile kwisiko laseMpumalanga. Phantse kwiminyaka eyikhulu edlulileyo, irayisi yokuguqulwa kolwandle yafika kumazwe aseNtshona. Emva kwexesha, inzala kuye yavutha, yafa.
Ukwakhiwa kunye neepropati zonyango.
Isiphumo sokuvumba, okwenzekayo kunye nokuthatha inxaxheba kwiibhaktheriya zamanzi - isiselo esivela kwilayisi lonyango lwamayeza. Esi siselo sinezixhobo ezininzi ze-organic acid, eziwusizo ezingenayo i-mafuta engcolileyo, ioli, iivithamini, i-enzymes kunye neemaminerali.
Ii-vithamines kunye neemaminerali eziyingxenye yerayisi yezobisi zisebenziswa ukwakha ii-enzyme zabo ngomzimba. Oku kuthetha ukuthatha inxaxheba ngokusebenzayo kwiinkqubo zokuxilisa umzimba kunye nokuqinisa umzimba. Yaye i-enzymes equlethwe kwisiselo iya kunceda ukuphula ukutya.
I-cholesterol esebenzayo yenziwa nge-acid e-unsaturated fatty acids, kwaye inqanda ukubunjwa kwe-cholesterol eyingozi, eyenziwa ngamafutha ezilwanyana. I-cholesterol eyingozi ifakwe kwimithambo yegazi.
Ilayisi lomdaka iqulethe izinto ezincedo ezinokuthoba ukuguga kwezicubu. Oku kufezekiswe ngokukhusela ukukhutshwa kwama-radicals amahhala kumaseli eethambo ngexesha lokwenziwa kwe-oxidation-reduction reaction. Phantse kwiminyaka eyi-100 edlulileyo kwakusungulwa ukuba yonke imiphumo yeekhemikhali yomsakazo iyenzeka ngenxa yesakhiwo se-radicals yamahhala. Yiyiphi inkululeko yokukhulula? Icandelo le-molecule ene-valence yamahhala (ngamanye amagama, sinesandla samahhala esinokubambisana nesinye into) sibizwa ngokuba yi-free radical. Ngokuqinisekileyo yonke i-radicals - ngokunyuka komsebenzi weekhemikhali. Ama-radicals amahhala ayenzileyo aphantsi kweempendulo zamakhemikhali, kwaye ngenxa yezi mpendulo, ii-radicals ezintsha zenziwa, njalo njalo. Oku kuyindlela yokuphendula. Phantse kwisiqingatha kwinkulungwane edlulileyo kubonakaliswe ukuba isizathu sokuba inetyhefu ye-oksijini yimihla ngemihla yamahhala. Emva kokubhengezwa kwimveliso-ye-metabolism, iiseli zikhula.
Ukongeza kuzo zonke ezi ngasentla, kwilisi yelwandle kukho into ekwazi ukubuyisela iinkqubo zesisombululo kwiisisiti zomzimba. Ngeempazamo ezahlukahlukeneyo ezixubileyo emgodini kunye namalungu, le nto ibaluleke kakhulu. I-acid ye-folic, ithatha inxaxheba kwi-synthesis yeproteins, inceda ekwakheni amangqamuzana egazi abomvu. Isiselo esivela kwilayisi siqulethe iifungi ezininzi kunye nama-microorganisms anceda ekubuyiseni umzimba.
Isiselo esisekelwe kwilayisi lonyango lwamayeza lisixa esilungisa ukukhuselwa komzimba, sinciphise uxinzelelo lobungqingili, siphucula iinkqubo zesisombululo emzimbeni, kwaye sinesakhiwo esichasayo, esichaphazelekayo kunye ne-antimicrobial properties. Xa uthatha okuselayo kunciphisa umzimba.
Kuza kube namhlanje, iifememisti ayinomdla kwilayisi lomdaka, njengomthombo wezondlo. Kulandela ukuba akukho miphumo emibi emzimbeni womntu efunyenwe. Kodwa ukuba ucinga oko kubandakanywa kule mveliso, unokugqiba ukuba oku kusela akufanele kusetyenziswe kubantu abanesifo sikashukela (ngenxa yokuba isiselo sinomshukela), isilonda se-peptic se-duodenum, isisu okanye i-asidi yesisu.
Indlela yokulungiselela isiselo?
Ukulungiselela isiselo esisemanzini irayisi ngokumangalisayo kulula. Ukwenza oku, kufuneka ubeke ezine iipuniwe zelayisi kwisitya segesi, ezimbalwa iziqulatho. Emva koko, udibanisa ilitha enye yamanzi angenakubanjwa kunye neepuniwe zintathu zeswekile. Emva koko, uthele umxube owomileyo welayisi kunye nesisombululo. Iintsuku ezimbini ukugxininisa, uze udibanise. Thatha kathathu ngosuku ngomlinganiselo wekombe. Inkqubo yokonyango yinyanga enye nesiqingatha. Isisombululo singagcinwa kwifriji ezingapheli iintsuku ezintlanu. Emva kweentsuku ezintlanu, irayisi yerayisi iyahlanjwa, kwaye iqala ukulungiselela isiselo esitsha.
Ukongezelela koku ngasentla, isisombululo esisekelwe kwirisi yezilwanyana zaselwandle singasetyenziselwa njengeliso lobuso. Iyakuthintela ngokucacileyo ulusu, i-tons up, idibanisa imibimbi kwaye inika isikhumba iliso elitsha. Isisombululo sinokususa isigxina somlomo, kuba sinempahla elwa ne-antimicrobial. Susa ukhathala emva kosuku olukhuni kuya kunceda ukuhlamba isiselo kwirayisi.
Ilayisi lomdaka lilungele ukukhusela izifo nokuphucula umzimba, kodwa kungekhona njengendlela yokulungisa.
Ukuhluleka kweHormon kwabasetyhini
Indlela yokudibanisa amayeza kunye nemveliso kunye?
Ukubhoboza ulwimi: kukufanelekile
Ukukhutshwa kweenwele kwimpumlo
Ubhedu obhetele kakhulu
Amaqanda abhaka nge sipinashi
Inkwenkwezi yaseBeverly Hills 90210 uShannen Doherty waqalisa i-chemotherapy
Ikhalenda yeentsuku zokukhanya kwelanga kunye neenyanga zonyaka ka-2015
I-calcium iyilungelelaniso eluncedo kwimpilo